Madaxweynaha Galmudug oo ku dhawaaqay Golihiisa Wasiirada
Madaxweynaha Galmudug oo ku dhawaaqay Golihiisa Wasiirada [ AKHRI]
CADAADO, Somalia - Madaxweynaha maamulka Galmudug, Axmed Ducaalle Geelle "Xaaf", ayaa galabta ku dhawaaqay Gollahiisa Wasiirada cusub, kuwaasi oo u badan xubno kasoo mid noqday Xukuumaddii Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Gollaha Cusub waxuu ka kooban yihiin 22 Wasiir, 22 kuu xigeen iyo 8 Wasiiru dowle, oo noqonaysa Xukuumad ka kooban 52 Xubnood.
Madaxweynaha ayaa ka codsaday Xildhibaanada Barlamanka Galmudug inay Codka Kalsoonida siiyaan Wasiiradiisa.
Wasiirada cusub kama aysan soo dhex-muuqan xubno matalaya Ahlu Sunna, oo si aad ah uga soo horjeeda Galmudug, horeyna u diiden inay la gashay heshiis lagu mideynayo labada maamul, ee iska soo horjeeda, islamarkaana kawada taliya wax ka yar labo gobol.
Magacaabista Wasiirada ayaa imaanaysa, xilli Xildhibaanada Barlamanka Galmudug ay diideen dalab uga yimid Madaxweyne Xaaf, oo ahaa inuu soo celiyo Wasiiradii maamulkii Cabdikariin Guuleed.
GAROWE- Madaxweynaha dowlada Puntland iyo wafti uu hogaaminayo ayaa la filayaa in maanta u ambabaxaan magalaada Cadaado halka soo la filayo iney ka dhacdo munaasabad lagu caleemo saarayo Madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug.
Booqashada Madaxweyne Gaas ...